Video: Saffron Revolution 2007 | Save Burma
Video: Saffron Revolution 2007
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းအမွေကတော့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ အခုချိန်ထိ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးတွေထဲက တခုကတော့ ၂ဝဝရ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး (Saffron Revolution) ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ် လုံးဝမရှိတဲ့၊ သာသနာဖျက် နအဖ အာဏာရှင် လူရမ်းကားတွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တော့မှ ဖျက်မရနိုင်တဲ့ အမဲစက်ကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆုံးခမ်းတိုင် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့။
Inside Myanmar: The Crackdown – 10 Oct 07 – Part 1 & Part 2
From: AlJazeeraEnglish Added: October 11, 2007
For this extended special news programme, Al Jazeera’s Tony Birtley went undercover in Myanmar to report exclusively on the people’s protests and resulting bloody crackdown by Myanmar’s military government, talking to the protesters, filming the bloody crackdown and gauging the mood of the nation.
Tagged with ရွှေဝါရောင်တော်လှန်�, Saffron Revolution
« World focus on Burma (17 September 2008)
Irrawaddy / Khit Pyaing: website URL for temporary use »
လားရှိုး ကုန်းဆာရွာမှာ လက်နက်ကြီးကျပြီး ရွာသားတစ်ဦးသေဆုံး
မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၄ ဦးရှိလို့ တပ်မတော်ထုတ်ပြန်
တိုက်ပွဲတွေပိုမိုပြင်းထန်လာမှာကို ရှမ်းမြောက်က ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေ
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ လမ်းလုပ်သား ကိုးဦးကို AA ပြန်လွှတ်
မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့လုပ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိခိုက်တယ်လို့ NLD ပြော
ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ ၁ဝဝ နီးပါးရှိလာပြီ
Governor reveals dead politician's affair at his funeral August 19, 2019
The governor of Nairobi has ignited an explosive debate amongst Kenyans over the issue of children born out of wedlock to powerful politicians and their lovers.
Hong Kong's weekend of peaceful protests August 19, 2019
Despite pouring rain, organizers estimate 1.7 million people attended an anti-government march in Hong Kong. CNN's Ivan Watson reports
Iranian oil tanker in standoff between UK and Iran leaves Gibraltar August 19, 2019
An Iranian oil supertanker that was seized by the UK,amove that came amid escalating tension between Tehran and the West, was released Sunday and was moving away from Gibraltar, according to local media and maritime tracking site.
No-deal Brexit report leaked as government effectively ends all EU law in UK August 19, 2019
With less than 75 days until Britain is set to exit the European Union,agovernment report leaked to The Sunday Times newspaper reveals the disastrous effectsano-deal Brexit would unleash on the country.
New Zealand finally trying to decriminalize abortion August 19, 2019
Veronica was 21 years old and scared.
The great electric car race is just beginning